ကိုနေမျိုးဝေ၏ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းဖြစ်စေရန် လှုံ့ဆော်သော ဖဘမှတ်ချက်များ ရေးသားခဲ့ခြင်းအား ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ရှုံ့ချကြောင်း ကြေညာချက် | Ko Rohingya
ကိုနေမျိုးဝေ၏ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းဖြစ်စေရန် လှုံ့ဆော်သော ဖဘမှတ်ချက်များ ရေးသားခဲ့ခြင်းအား ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ရှုံ့ချကြောင်း ကြေညာချက်
မတူကွဲပြားခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ၏ ဥက္ကဌ ကိုနေမျိုးဝေမှ ၎င်း၏ဖေ့ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာတွင်လည်းကောင်း၊ အခြား ဖဘစာမျက်နှာ အချို့တွင်လည်းကောင်း၊ မြန်မာ့တိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မွတ်စလင်မ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ သာသနာတော်မြတ်အား ကျူးကျော်စော်ကားသည့် အလွန် ရိုင်းစိုင်း၍ အောက်တန်းကျသော မှတ်ချက် အချို့ကို ရေးသားခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ရေးသားခြင်းသည် နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် အခြား တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် လုံးဝ ဆန့်ကျင်လျှက် ရှိပါ သည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခု၏ ဥက္ကဌဖြစ်သူ ကိုနေမျိုးဝေမှ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်၊ လူမျိုးရေး အစွန်းရောက် မှတ်ချက် များရေးသား၍ မြန်မာ့ လူ့ဘောင်အတွင်း ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းဖန်တီးရန် လှုံ့ဆော်နေခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏ အစည်းအရုံး မှ ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ရှုံ့ချကြောင်း ကြေညာလိုက်ပါသည်။
ထို့ပြင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အပါအ၀င် အခြား မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ အာဏာပိုင်များအနေနှင့် ၎င်းကိုနေမျိုးဝေအား မြန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲတရားဥပဒေများအရ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူပေးပါရန် လေးလေးနက်နက် တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ပြည်သူပြည်သားများအားလုံး အကြမ်းဖက်မှု ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးမှ ကင်းဝေး၍ ကိုယ်၊ စိတ်၊ ၀ိညာဉ် သုံးပါး စလုံး အေးချမ်းသာယာကြပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလျှက် ရှိပါသည်။
ကြေညာချက်အား PDF ဖိုင်ဖြင့် ဒေါင်း၍ ဖတ်ချင်သူများအတွက် လင့်ခ်-
မှတ်ချက်။ ။အောက်ဖော်ပြပါ ဓာတ်ပုံပါ စာသားမှတ်ချက်မှာ အနှီဦးနေမျိုးဝေရေးသားခဲ့သော ဘာသာရေး၊ လူမျိုးအဓိကရုဏ်းဖြစ်စေရန် လှုံ့ဆော်သော ရေးသားချက်များအနက်မှ တစ်ခုပင်ဖြစ်ပြီး၊ အခြား မှတ်ချက်များကျန်ရှိပါသေးသည်။ အကယ်၍ ကိုနေမျိုးဝေမှ ၎င်းရေးသားခဲ့သည့် မှတ်ချက်များအတွက် မြန်မာ့ မွတ်စလင်မ်လူထုတစ်ရပ်လုံးအား တရားဝင်စာထုတ်၍ ၂၄ နာရီအတွင်း ပြန်လည် တောင်းပန်ခြင်း မပြုပါက ကျွန်ုပ်တို့အစည်းအရုံးအနေနှင့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဌများနှင့် အခြား အစိုးရအာဏာပိုင်အကြီးအကဲများသို့ ဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တိုင်ကြားသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ မီဒီယာများသို့လည်း ယင်းတိုင်ကြားချက်ကို ပေးပို့သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း။
This entry was posted on February 6, 2013, in Burmese Muslim Youths For Human Rights And Justice and tagged စစ်အာဏာရှင်, တိုင်းရင်းသား, ရခိုင်ဘုန်းကြီး, ရခိုင်အကြမ်းဖက်သမား, လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီး, နေမျိုးဝေ, ကြေညာချက်. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← အစိုးရကိုယ်တိုင် ပါဝင်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီးအတွင်း အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရသော အပြစ်မဲ့ မွတ်စလင်မ်များ စာရင်း
အမျိုးသားလုံခြုံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ နှုတ်က္ခပါဌ်တော် →